गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारगण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव !
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव !
पोखरा ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा वि’घटन भइसकेपछि प्रदेशमा के हुन्छ त ? त्यसको चर्चा हुन थालेको छ । नेकपाकै सांसदले भनेका छन्, “यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः आउँछ ।” यसको अर्थ अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने छ । उसो त, गण्डकीमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले गत हप्तामात्रै विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् ।विशेष अधिवेशन पछाडि हिउँदे अधिवेशन बस्ने समय पनि नजिकिँदै छ ।
तर, यही हिउँदे अधिवेशनले यहाँ पनि सत्ता समीकरण बदल्ने संकेत देखाएको छ । जसको संकेत नेकपा र कांग्रेसकै सांसदबाट आएको छ ।गण्डकीका सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता रामजीप्रसाद बराल जीवनले भने, “यहाँ हामीले सल्लाह त गरिसकेका छैनौँ, केन्द्रीय समितिको बैठक ७ गते छ । त्यसले के निर्णय लिन्छ । त्यसको आधारमा यहाँका गतिविधि पनि अगाडि बढ्छन् । गण्डकीमा ओलीइतरको सांसद एकजुट हुनुहुन्छ । गण्डकीमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु अधिकांश ओलीको यो कदमको विपक्षमा छन् ।”
सरकार फेरिने निश्चित रहेको र कांग्रेसलाई समीकरणमा लिनुपर्ने उनले बताए । “नेकपाको अर्को सरकार बन्छ, अहिले चाहिँ ओलीको सरकार रहने कुरा भएन । सरकार फेरिने निश्चित छ । स्वभाविक रुपमा हामीले पक्कै पनि समीकरण गर्नुपछ । समीकरण गर् नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि बहुमत पुग्छ । तर, कांग्रेसलाई लिनुपर्छ ।”ओली पक्षका एक सांसद भन्छन्, “सबै जनामा एकै ठाउँमा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि देखिँदैन, एमालेबाट धेरै जान्छन् भन्ने पनि छैन ।यहाँ एउटामात्र पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउन सक्दैन ।कांग्रेस जसपा र मा’ओवादी मिल्दा नपुग्ने भनेको तीन चार मत हो, त्यो ल्याउन सके भने उनीहरुले सरकार बनाउँछन् ।”
पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित सांसद दीपक कोइराला पनि एलाइन्स अब नरहने बताउँछन । नेकपाको वि’वाद च’र्किँदै जाँदा मुख्यमन्त्री गुरुङको नै प्र’तिवाद गर्दै आएका कोइरालाले यहाँ पनि समीकरणको खेल अवश्य हुने बताउँछन् । उनले अब प्रदेशमा हुने समीकरण बारे केही जानकारी पनि दिए ।“पार्टी त विभाजन हुन्छ । विभाजनको दिशामा गइहाल्यो । अहिलेको एलाइन्स नरहने भनेको पू’र्वमाओवादी, कांग्रेस, बाँकी रहेका दल र पूर्वएमालेमा माधव नेपालका पक्षका सांसद आएपछि बहुमत पुग्छ”, उनले भने ।मुख्यमन्त्री वि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमत पुर्याउन नसके यहाँ पनि वि’घटन हुने हो कि भन्ने आशंका उनमा छ ।
तर, प्रदेशको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस भने निर्णायक रहने उनको ठ’हर छ ।“कांग्रेसको समीकरण नै कोसँग बन्छ भन्ने कुरा हो । ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत आएन भने त्यो भनेको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो,” उनले भने ।के साना दल निर्णायक छन त ? पूर्वएमालेभित्र पनि ओली पक्षका २७ सांसद एकजुट रहने र साना दलले समर्थन गर्ने हो भने ३२ सांसदसहित यहाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्छ ।तर, साना दल भने त्यति पर सोचिनसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने, “दहमा अहिले नै ढुंगा हानि नहालौँ ।
प्रदेशको अवस्था के हुन्छ त्यो अनुसार सोच्ने हो । पहिला त हामीले समर्थन गरेका हौँ, नयाँ स्थिति नआउँदासम्म कुरा नगरौँ कि ।”जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले चाहिँ पार्टीले भने अनुसार नै हुने बताए । ओली पक्षले सरकार बनाउने दुइवटा विकल्पमध्ये एउटा चाहिँ साना दलसँगको सहकार्य नै हो ।निर्णायक भनिएको कांग्रेसको भूमिका के त ? के कांग्रेस सरकारमा जान्छ त ? कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, “हामीलाई जनताले सरकार बनाउनका लागि मत दिएका हुन् ।” उनले कांग्रेस सरकारमा जाने संकेत गरे ।
सत्ता समीकरणको बारेमा कांग्रेसको भूमिका हुने र यसलाई केन्द्रले कुनै प्रभाव नपार्ने उनले बताए । हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने संकेत ती सांसदले दिए ।“हामी स्थिर सरकार होस् भन्ने पक्षमा हो । त्यो नभएपछि हेरेर बस्ने कुरा त भएन । प्रदेशको अझै कार्यकाल बाँकी छ । यो बिचमा अहिले मुख्यमन्त्रीले लिएर बसेको बहुमत छैन भनेर प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।” उनले अ’विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेतर्फ संकेत दिए ।